Iindaba -I-Su Zimeng: Oomatshini bokwakha bayatshintsha ukusuka kukonyuka okujolise kwintengiso ukuya kuhlaziyo lweemarike zentengiso kunye nokuphuculwa kwentengiso
USu Zimeng, umongameli we-China Construction Machinery Industry Association, utshilo kwi "Ngqungquthela yeshumi yezixhobo zoKwakha kunye neNkomfa yoLawulo loVavanyo lwezixhobo" ukuba abembi bezinto eziyimbalasane kushishino loomatshini bokwakha. Iimpawu zorhwebo lwasekhaya zingaphezulu kwe-70% yeemarike ezikhoyo zangoku. Ngakumbi nangakumbi iimveliso zasekhaya ziya kuxhotyiswa, kwaye iimveliso zasekhaya ziya kuba nempumelelo enkulu ekuthembekeni, kuzinzo, nasekugcineni umbane kunye nokunciphisa ukungcola.
NgokukaSu Zimeng, ukuthengiswa koomatshini bokwakha abahlukeneyo kunye nezixhobo kulo nyaka kuye kwafikelela kwincopho kule minyaka idlulileyo. Umthamo wentengiso yeetreyini zeelori ufikelele kwiiyunithi ezingama-45,000, kwaye umthamo wentengiso yeekhreyi ezifikayo wafikelela kwiiyunithi ezingama-2,520, kwaye imfuno yeekhranti zokurhubuluza inqabile ukusukela kulo nyaka. Amaqonga okuphakamisa kunye namaqonga omsebenzi womoya akhule ngokukhawuleza kule minyaka idlulileyo, kwaye kulindeleke ukuba ezi mveliso zibe negumbi elikhulu lophuhliso kwiminyaka emi-5 ezayo.
"Iinkcukacha-manani ezipheleleyo ezivela kumaqela amashishini ezibonisa ukuba oonxibelelwano abaphambili bombutho babonisa ukuba ingeniso yokuthengisa kwi-2019 inyuke nge-20% xa kuthelekiswa ne-2018, kwaye inzuzo inyuke nge-71.3%." Kuthetha uSu Zimeng. Idatha ebanzi yeenkcukacha-manani eziphambili zeshishini zibonisa ukuba isiseko se-2019 kwi-2020, ingeniso yentengiso yeshishini loomatshini bokwakha inyuke nge-23.7%, kwaye inzuzo inyuke ngama-36%.
Ngokwembono yetekhnoloji yemveliso, iinkampani ezininzi eBauma kulo nyaka zibonise iimveliso zetekhnoloji entsha, ibhetshi yeemveliso ezikrelekrele ezinomsebenzi oncedisayo, ukuqhuba okungagunyaziswanga, ulawulo lweklasta, ukhuseleko, imisebenzi ekhethekileyo, ulawulo olukude, ukufumanisa isifo, ukulawulwa komjikelo wobomi, njl. Imveliso isetyenziswe ngokusesikweni, isonjululwe ngokulula iingxaki ezithile kulwakhiwo, yahlangabezana neemfuno zezixhobo zokwakha ezinkulu zobunjineli, kwaye yazala ibhetshi yomatshini wobunjineli obuphezulu kunye nezixhobo eziphambili zobugcisa. USu Zimeng uthe inqanaba lokwenziwa kwedijithali, ukuluhlaza, kunye nokuzaliswa kweemveliso ezithile kufuneka kuphuculwe. Ezinye izixhobo ezikhulu kunye namacandelo aphambili azonelanga kukhuphiswano lweemarike, kodwa emva "kwesiCwangciso seMinyaka emiHlanu se-14", iimveliso ezininzi ziya kufikelela kwinqanaba elikhokelayo kwilizwe liphela. .
Ukujonga ukukhula kwexesha elizayo koomatshini bokwakha ngokwembono yolwakhiwo lweemfuno, uSu Zimeng ukholelwa ukuba okokuqala, oomatshini bokwakha bayashenxa ukusuka kwintengiso eyonyukayo bayokuhlaziya imarike yemasheya kunye nokuphucula ukunyusa intengiso; Okwesibini, ukusukela ekusebenziseni iindleko ukuya kumgangatho ophezulu kunye nokusebenza okuphezulu; Ubume boomatshini ngokubanzi ngokubanzi kubandakanya ikakhulu idijithali, ezikrelekrele, eziluhlaza, ezimnandi, iiseti ezigqibeleleyo, izihloko zomsebenzi, izisombululo ezibanzi, kunye nolwakhiwo lweemfuno ezahlukeneyo. USu Zimeng uthe ngokusetyenziswa okuvuthiweyo kwezinto ezintsha kunye neetekhnoloji, indawo ezintsha zokwakha kubandakanya iiplate, indawo ebandayo kakhulu kunye nezinye iindawo zibeke phambili iimfuno ezintsha kwizixhobo, zikhuthaze ukuphuculwa kwetekhnoloji yokwakha, kwaye zabeleka nemfuno yezixhobo ezivelayo. . Lo mkhwa ucace ngakumbi nangakumbi, kubandakanya icandelo lokwakha isiseko, kusekho ukukhula okukhulu.
Ukusukela ngo-2020, imfuno yentengiso yoomatshini basekhaya inyuke ngokubonakalayo, kwaye ixabiso lokuthengisa ngaphandle kurhwebo lubonakalise imeko eyezantsi. USu Zimeng uthe: “Kulindeleke ukuba ngonyaka ka-2021, ibango elitsha kunye nemfuneko yokubuyiselwa kwimakethi yoomatshini bokwakha izakudlala indima kunye. Ngokudibana nokuqokelelwa kwemigaqo-nkqubo yesizwe, ishishini loomatshini bokwakha liza kuqhubeka likhula ngokuzinzileyo. ”